ICC: Madasha & maalmaha ay ciyaarayaan kooxaha AC Milan, Real, Inter, Bayern Munich, Liverpool, PSG, Chelsea iyo kuwo kale oo la shaaciyey! – Gool FM
ICC: Madasha & maalmaha ay ciyaarayaan kooxaha AC Milan, Real, Inter, Bayern Munich, Liverpool, PSG, Chelsea iyo kuwo kale oo la shaaciyey!
(New York) 26 Maajo 2016 – Kooxo ay ka mid yihiin AC Milan, Bayern Munich, Liverpool, Real, Inter, PSG iyo Chelsea ayaa sanadkan ka mid ah kooxaha ku faltani doona Koobka Horyaallada Adduunka (International Champions Cup) dufcaddiisa Maraykanka.
Haddaba waxaa haatan si rasmi ah loosoo saaray saacadda, meesha iyo maalinta la ciyaari doono kulamadan.
27 Luulyo 2016, Chicago: AC Milan-Bayern Munich saacadda maxalliga 20.00 taasoo ku beegan 3-da xilliga dambe oo ah 28-ka Luulyo aminta Yurub.
27 Luulyo 2016, Columbus: Real Madrid vs PSG saacadda 3-da xibinka dambe
30 Luulyo 2016, Santa Clara: Liverpool vs AC Milan saacadda maxalliga ah 19.00 kuna beegan 5-ta aroornimo 31-ka Luulyo xilliga Yurub.
3 Agoosto 2016, Minneapolis: Milan-Chelsea saacadda maxalliga ah 20.00 taasoo ku aaddan 3-da xibinka dambe 4-ta Agoosto.
3 Agoosto 2016, East Rutherford: Bayern Munich vs Real Madrid saacadda maxalliga ah 19:30 kuna beegan 5:30 xilliga Yurub.
Halka kaga bogo jadwalka oo dhamaystiran.
Ciyaarahan ayaa toos looga daawan doonaa hillino ay ku jiraan Premium Sport.
IMAGE DISTRIBUTED FOR INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP – Charlie Stillitano, chairman of Relevent Sports, speaks during the 2016 International Champions Cup North America announcement, on Tuesday, March 22, 2016, in New York. (Jonathan Fickies/AP Images for International Champions Cup)
Arsenal oo kor u qaaday qiimaha ay ku doonayso daafaca Bolton ee Rob Holding